Nihodina ny nify
Ny voka-dratsin'ny nify, amin'ny ankapobeny, dia miteraka tsy ampoizina, izay miteraka fahasahiranana be. Tena mampidi-doza sy mampidi-doza ny toe-javatra rehefa tsy misy fomba ahafahana mitady fanampiana avy amin'ny mpitsabo nify. Raha tapaka ny ampahany amin'ny nify dia zava-dehibe ny maka fepetra fisorohana ho an'ny tenanao manokana izay hanampy amin'ny fisorohana ny fandravana bebe kokoa ny emails sy ny fampivoarana ireo aretina tena lehibe ao amin'ny lava-bolo.
Nahoana no nipoitra ny nifiny?
Ny antony mahatonga ny olana tokony hodinihina dia betsaka:
Ny fahasimbana amin'ny nify mandritra ny sakafo (voanjo, voankazo misy taolana, trondro maina, karama);
basy mekanika (ratra vokatry ny korontana);
tsy fahampian'ny kalesy eo amin'ny vatana;
ny fisian'ny kisoa;
mitombo ny fiarovana;
Pathology of internal organ.
Misy ihany koa ireo tranga izay voalaza fa vokatry ny fihetsika tsy tompon'andraikitra amin'ny olona iray ho an'ny fahadiovana ara-pahasalamana. Ohatra, raha tapaka ny nify iray misy tombo-kase, dia azo atao ny misoroka ny zava-nitranga amin'ny fitsidihana ny mpitsabo nify amin'ny fisorohana fisorohana isaky ny 6-8 volana.
Inona no tokony ataoko raha manasaraka ny nify?
Ny andraikitra ilaina dia miankina amin'ny lafiny maro amin'ny karazana kilalao:
Fiatrehana ny emails. Ity no fandringanana tsy dia misy dikany, izay mora atao. Ny hany loza dia ny tsy fisian'ny fitsaboana, izay miteraka fahavoazana ara-pahasimbana ny tebiteby.
Famaritana momba ny dentite. Tsy miteraka fanaintainana maharary izany, fa ny moka dia tena hita mibaribary. Ny famehezana an'io tranga io dia tsy miasa, mila manorina na mamerina ianao.
Fikirakirana volumetric amin'ny fiafarana nerveuse. Raha tapaka ny akanjom-bolo sy ny marary ny nify dia ilaina ny fidirana avy hatrany avy amin'ny dokotera matihanina.
Rehefa nahita ny olana niheverana, dia ilaina ny mitodika avy hatrany amin'ny manam-pahaizana. Raha toa ka tsy azo atao izany noho ny antony marobe, dia tokony:
Tohizo isan'andro ny nifinao, fara fahakeliny in-droa isan'andro.
Matetika ny rano no misasatra rano amin'ny sira kely mba hisorohana ny fivoaran'ny karia.
Mba hampiasana tsiran-doko.
Aorian'io sakafo io, tandremo tsara ny vava mandoaka, ary ataovy izay hahazoana antoka fa tsy misy sakafo atodika eo akaikin'ny zera simba.
Miaraka amin'ny fifehezana goavam-be iray, miezaha hahita ny ampahany aminy ary mamonjy azy alohan'ny hitsidihana ny dokotera. Izany dia hanampy ny dokotera hamerina haingana ny endrika ary hampitombo ny nify.
Raha marary mafy ny sendra aretina, indrindra rehefa voaporitra ny fototarazo ary potika ny pulpana, dia ampangaroan'ny tavy tavy amin'ny Lidocaine na Novocain amin'ny faritra misy olana.
Ny dokotera irery ihany no afaka manome fanampiana tena izy. Ny taktika amin'ny fitsaboana dia miankina amin'ny fahasimban'ny nify.
Amin'ny fanosehana kely sy ny famotehana ny emails, dia ampy ny famehezana. Ny teknika iray ihany no ampiasaina raha toa ka nizarazara kely ny ampahany kely amin'ny ambim-bavany.
Ny fanitsakitsahana ny tsy fitoviana amin'ny dentite dia mitaky asa be pitsiny sy malefaka - famerenana amin'ny laoniny. Io famerenana amin'ny laoniny io dia mitaky fitandremana dia mamaritra ny halavany, ny rafitra ary ny endrika. Zava-dehibe ihany koa ny misafidy ny fitaovana izay mifanandrify tsara amin'ny endriny voajanahary amin'ny alokaloka.
Raha mikarakara fialamboly ny mpitsabo, miaraka amin'ny fijerena ny fiafarana nerveuse sy ny pulpana, dia atao eo ambanin'ny anesthesia eo an-toerana ny fiorenan'ny lakandrano sy ny fanesorana ny bakteria. Ampitomboana ny fahamendrehana sy ny tanjaky ny faritra azo havaozina amin'ny alàlan'ny fametrahana tsipika fanindronana.
Tsara ny manamarika fa indraindray dia tsy azo atao ny mamerina ny nify. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fampidirana ny satroboninahitra, ny lapoaly na ny plastika dia asaina.
Fanaintainana azo afindrafindra - iza no tsara kokoa?
Ahoana ny fomba hanatsarana ny endrik'olona?
Famerenana amin'ny laoniny ny ravina maharitra
Ny asan'ny hyaluronic asehon'ny Mesotherapy
Karatra masira ho an'ny tarehy
Ahoana no hanamafisana ny embona amin'ny nify?
Fandrosoana Eyelash - vokany
Fangatahana fanamafisana mahazatra
Ahoana ny fanesorana ny fanitarana?
Sakafom-panahy eo ambany maso - ahoana no ahafahana miala?
Hafiranjy ho an'ny tarehy
Maskin'ny hoditra fotsifin'ny tarehy - ny fikarakarana matihanina tsara indrindra sy ny tokantrano
Zaza nify - fitsaboana
Ahoana no hanaisotra ny ketrona eo amin'ny handrina?
Ny maso dia manidina Teborod
Estrogens amin'ny sakafo
Ny root of aira - ny fananana medikaly sy ny fanoherana
Jeans Jeux Fashionable 2015
Fanangonam-bolo amin'ny fararano
Malahelo i Irina Dubtsova?
Tavoahangy ho an'ny alikaola
Fiompiana trondro ho an'ny zazakely
Ranomasin-dranomasina - fampiharana
Aiza ny nosy Karaiba?
Sary mariazy ho an'ny sary fitifirana
Ahoana ny fomba hanamboarana makadela?
Inona no hanolorana lehilahy iray 14 Febroary - hevitra
Ahoana ny fomba ampiasana ny goji goji?
Sakafo eo amin'ny sehatry ny firenena
Ahoana no fomba fanaovana ny kilalao ho an'ny kisoa amin'ny tananao?
Sakafom-bary ho an'ny tarehy - tabilao tsotra ao an-trano
Balyk avy amin'ny mofomamy
Ahoana no fomba fitsaboana ny orona mihazakazaka amin'ny zaza vao teraka?